IP65 150W mere ka ìhè idozi okporo ụzọ China Manufacturer
Nkọwa:Egwuregwu Ngwunye 150W,Egwuregwu Ngwá Ụzọ,Led Street Light Shoebox
Home > Ngwaahịa > Ejiri Lightbox Shoebox > Ejiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ > IP65 150W mere ka ìhè idozi okporo ụzọ
NKWU NDỊ NA- ECHIKE : Bbier 150W duziri ìhè n'okporo ámá nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 400W HPS / MH nnọchi.
OWU OTU: Bbier Ejiri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị mma maka afọ 50,000 nke ndụ.
MGBE AJỤ AKA: Bbier Led street light shoebox na-abịa site na nkedo na-adaba ngwa ngwa 2-3 / 8 nke anụ ọhịa na-agbakwunye mfe iji wụnye ọkụ na-adọba ụgbọala, ọ dị mfe igbanwe ihe nkedo na-arụ ọrụ maka ogwe aka nke ogwe aka na nkwụnye anyị.
MGBE A GA-EKWU - Ụzọ okporo ụzọ anyị S na- eme ka ìhè dị mma maka ihe ndị dị n'èzí dị ka ìhè idei mmiri, ìhè nchebe, ọkụ ihu, ọkụ n'okporo ámá, ọkụ ọkụ, ebe nchekwa ụgbọala.
EKWU NDỊ ỌZỌ AKA: Bbier S hoe box street Light is certified by ETL, Consortium Lens Consortium (DLC) Ọkụ ọkụ ọkụ akwadoro, nke na-eme ka mma mma, nchekwa na ntụkwasị obi.
Egwuregwu Ngwunye 150W Egwuregwu Ngwá Ụzọ Led Street Light Shoebox Egwuregwu egwu nke 1000w 80W Egwuregwu Nwunye Egwuregwu egwu nke Musco Egwuregwu Egwuregwu Egwu 640W Egwuregwu Egwuregwu Mpaghara 500W